WordPress: Sida loo dhiso Tag Cloud Page | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 22, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah astaamaha cusub ee mawduucaygu waa bog daruur tag ah. Waan jeclahay daruuro tag, laakiin ujeedada dhabta ah looma samayn. Daruuraha taaga ah ee aan soo bandhigo ayaa runtii ah wado aniga aan ku garto in aan mowduuc ku sii joogayo iyo inkale ama fariinteyda blog-ka ay isbedeleyso waqti kadib.
Iskaashato blogger cusub Al Pasternak, ayaa la weydiiyay sida loo dhiso bogga Tag iyadoo la adeegsanayo Ultimate Tag Warrior Plugin.
Waa tan sida: Ka dib markaad rakibto qalabka wax lagu beddelo oo aad wax ka beddesho xulashooyinkaaga, waxaad si fudud u gelineysaa nambarka soo socda boggaaga Template halka ay ka kooban tahay waxyaabaha lagu soo bandhigo. Adigu ma rabto inaad dhigto meeshii aad ka koobnayd… Kaliya kudhawaada
Kudar bog la yiraahdo "Taag" oo ka tag waxyaabaha ku jira madhan. Voila! Hadda bogga ayaa soo bandhigi doona daruurahaaga tag!
Feb 22, 2007 markay ahayd 4:53 PM
Daruurahaaga tag ayaa u muuqda mid aad u fiican Doug! Dariiq weyn oo loogu talagalay akhristayaasha cusub si ay isla markiiba u ogaadaan nooca walxaha aad wax ka qorto.
Feb 22, 2007 markay ahayd 4:56 PM
Talo ahaan soo jeedin saaxiibtinimo, waxaan kugula talin lahaa in aad iska dhigto "Ku qor faallooyinka e-maylka" sanduuqa aan la dooran.
Dad badan ayaa si dhakhso leh uga faallooda oo xitaa ma ogaadaan ikhtiyaarkaas yar. Markii ay bilaabaan inay 'spammy' ku soo diraan e-mayllada oo aysan fahmin sababta, waxay ku noqon kartaa wax laga xumaado.
Kaliya labadayda doollar! 🙂
Feb 22, 2007 markay ahayd 8:14 PM
Waxaan helayaa calaamado isku dhafan oo ku saabsan calaamadda macaamiisha… dhowr qof oo ixtiraam leh ayaa i soo diray oo ii sheegay inay jeclaan lahaayeen in la doorto si aysan u ilaawin inaad ku qorto Waxaan jeclaan lahaa inaan ku qaldamo dhinaca doorashada. Haddii qof ka jawaabo faalladaada, dabcan waxaad u baahan tahay inaad hesho ogeysiis. Wayna fududahay in laga baxo.
Feb 23, 2007 markay ahayd 12:18 PM
Gotcha, waxyaabo fiican.
Febraayo 24, 2007 saacadu markay tahay 11: 14 AM
Waa inaan mar labaad daliishadaa Doug halkan.
Markii la qorayo faallo, qofku wuxuu ku biirayaa / bilaabayaa dood. Sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay tahay wax dabiici ah, in qofku rabi lahaa in la ogeysiiyo.
Feb 27, 2007 markay ahayd 1:16 PM
Mar 22, 2007 at 2: 12 PM
Waxaad ku shaqeysan kartaa wax kabadan hal midab xikmad.
Hal dariiqo oo aad ugu adeegsan karto midabada daruurtaada tag:
- dooro midab weyn, u qoondee farta ugu weyn;
- “isku dar” midabkan farta yar yar.
Tusaale "midabayn" ah oo ku saabsan
May 4, 2007 at 6: 18 AM
Waxaan isku dayayaa inaan dejiyo baloog aan ku soo bandhigi karo baloogyo badan oo dad kale ah oo ku jira daruur tag ah Tani ma shaqeyn doontaa?
May 4, 2007 at 7: 43 AM
Xiiso leh, Tom. Uma maleynayo in xalkaani shaqeyn doono maadaama uu si fudud uga soo jiidayo astaamaha lagu soo daray boggan kaligiis. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in la jiido oo la isku daro tags iyadoo la adeegsanayo Technorati's API haddii mid kasta oo ka mid ah baloogyada uu ku yaal Technorati.
Waxay u egtahay mashruuc mashquul yar oo barnaamij ah!
Jun 11, 2007 at 9: 31 PM
Salaan Mudane Doug
Waxaan adeegsanayaa Jerome's Keywords Plugin si aan u abuuro tag-Cloud. Waxaan kugula taliyay inaad isticmaasho Jerome's Keywords Plugin halkii aan ka isticmaali lahaa Ultimate Tag Warrior.
Waxaan u maleynayaa Ultimate Tag Warrior inay aad u adag tahay in la isticmaalo. mahadsanidiin sxb.
Jun 11, 2007 at 9: 45 PM
Mahadsanid, Dendi! Waxan kudarsaday wax lamid ah sheyga kujira faallooyinkaaga. Waxaan aaminsanahay Ultimate Tag Warrior inay xoogaa cabsi gelin karto.
Apr 6, 2008 at 2: 45 PM
Tilmaam quruxsan Waad ku mahadsantahay wadaagista.